How Do Young Zimbabweans Feel About Their Future? : NPR
How Do Young Zimbabweans Feel About Their Future? Renee Montagne talks to Fungai Machirori, a 29-year-old blogger in Harare, Zimbabwe, to gauge the mood of young people following Zimbabwe's presidential election and to discuss what they see as the future for their country.
Embed <iframe src="https://www.npr.org/player/embed/208167252/208176357" width="100%" height="290" frameborder="0" scrolling="no" title="NPR embedded audio player">
How Do Young Zimbabweans Feel About Their Future? 4:11
Renee Montagne talks to Fungai Machirori, a 29-year-old blogger in Harare, Zimbabwe, to gauge the mood of young people following Zimbabwe's presidential election and to discuss what they see as the future for their country.
MONTAGNE: Fungai Machirori is the founder of the website Her Zimbabwe.